Umcintiswano ohlose ukuthuthukisa izikole | News24
Umcintiswano ohlose ukuthuthukisa izikole
ISITHOMBE: sITHUNYELWEIqembu lase Edendale Technical elanqoba umcintiswano wangonyaka odlule.
INHLANGANO i-Scie-Matical-SA izoba nomcintiswano wayo waminyaka yonke i-Scie-Matical Cup ngomhlaka 24 kuNhlangulana (Juni) enkundleni yezemidlalo i-Waadley, e-Edendale.
I-Scie-Matical-SA uhlelo olulekelela izikole ukuthi zikwazi ukuzithuthukisa futhi luphinde lulekelele abafundi ukuthi bekwazi ukufeza amaphupho abo ngokusebenzisa ubuchwepheshe.
Okhulumela i-Scie-Matical-SA, uSandile Shabalala uthe: “Siyi-Scie-Matical-SA siyakholelwa ekutheni ezemidlalo zingadlala indima enkulu ekutheni kubekhona uguquko emphakathini yethu, ikakhulukazi uguquko olungaba yinzuzo ebantwini abasha,” kusho yena.
Uqhube wathi yingakho le nhlangano yabona kufanelekile ukuba ibe nemidlalo yayo yokuqala ngonyaka ofile eyayingenelelwe yizikole ezine.
UShabalala uthe imidlalo yakulonyaka izoqhubeka kule eyango nyaka odlule njengoba izikole ezizobe ziyingxenye yale midlalo zizoncintisana kwibhola lezinyawo kanye ne-netball.
Uthe: “Kulokhu kuzongenela izikole eziyisishiyagalombili ezizinze emalokishini ase-Pietermaritzburg. Kulezi zikole kubalwa izikole zamabanga aphakeme iKusaselihle, Amakholwa, iSinqongweni, iNsikayethu Comprehensive, iNyonithwele kanye neMehlokazulu neZamazulu Secondary ne i-Edendale Tech,” kusho yena.
Uqhube wathi kukhona abahlanganyeli abavela kwizinhlan-gano ezahlukahlukene abalekelela ngokuthi lomcintiswano ube yimpumelelo. “Ngingabala uSduduzo Dlamini kanye noJabulani “JB” Ncobeni abavela e-Edendale abadlalela iThanda Zulu Royals abangamanxusa alomcintiswano.
Kanti futhi kukhona abaxhasi esibabonga kakhulu ngoxhaso lwabo, inxanxathela yezitolo zase Edendale abazoxhasa ngeziphuzo nangokuya ngasethunjini, kanti i-Maritzburg City yona izoxhasa ngezokuthutha kuthi uMnyango wezeMidlalo wona uzoxhasa ngezindondo,” kusho uShabalala.